Sheekh Aadan Madoobe oo iska casilay xilkii Xisbiga Himilo Qaran + Sababta - Caasimada Online
Home Warar Sheekh Aadan Madoobe oo iska casilay xilkii Xisbiga Himilo Qaran + Sababta
Sheekh Aadan Madoobe oo iska casilay xilkii Xisbiga Himilo Qaran + Sababta
Muqdisho (Caasimada Online) – Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Sheekh Aadan Madoobe) oo ka mid ah musharixiinta u taagan xilka guddoomiyaha Golaha Shacabka ee baarlamaanka 11-aad ee dalka oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo dhammeysirka doorashooyinka Somalia.
Aadan Madoobe ayaa shirkiisa jaraa’id ku shaaciyey inuu iska casilay xilkii uu ka hayey xisbiga Himilo Qaran ee uu hoggaamiyo Madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed.
Sababta ayaa waxa uu ku sheegay inuu u hoggaansamayo, sida uu qabo Dastuurka KMG ah ee ku aadan qodobkiisa la xiriira in qofka isku sharraxayo guddoonka baarlamaanka uu marka hore iska cisilo, haddii uu xil ka hayo xisbiyada siyaasadeed ee ka jira gudaha dalka.
“Shirkeyga jaraa’id maanta wuxuu ku saabsan yahay inaan u caddeeyo Ummadda Soomaaliyeed sida uu qabo Dastuurka Qaranka ee KMG ah qodobkiisa 65-aad, farqaddiisa 3-aad oo na fareyso qof kasta oo u tartamaayo guddoonka Golaha Shacabka, mise guud ahaan baarlamaanka Soomaaliyeed inuu iska casilo xil kasta oo uu u hayey xisbi siyaasadeed, sidaas daraadeed waxaan u caddeynayaa Ummadda Soomaaliyeed inaan iska casilay xilkii aan ka haayey Xisbiga Himilo Qaran,” ayuu yiri Sheekh Aadan Madoobe.
Sidoo kale wuxuu tilmaamay, haddii uu ku guuleysto xilka guddoomiyaha Golaha Shacabka inuu u sinnaan doono dhinacyada siyaasadda dalka, kana shaqeyn doono cadaaladda.
“Haddii Ilaahey igu guuleeyo waxaa noqon doonaa Oday Soomaaliyeed oo u siman dhammaan garabyada siyaasadeed ee dalka, cadaaladda iyo sinaana aan ku maamuli doono,” ayuu markale hadalkiisa sii raaciyey xildhibaan Sheekh Aadan Madoobe.
Hadalkiisa ayaa ku soo aadayo, iyada oo maanta la bilaabay diiwaangelinta xubnaha musharixiinta ee u taagan guddoonka labada Aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya, kadibna doorashada labada guddoon la qaban doono 26 iyo 27 bishan April.